Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Yurub » Ruushka iyo San Marino oo ka shaqeynaya safarka fiisaha bilaashka ah
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Ammaanka • Wararka San Marino • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Sida laga soo xigtay Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Ruushka Lavrov, Ruushku wuxuu rajaynayaa in sida ugu dhakhsaha badan xaaladda nadaafadda iyo cudurrada faafa ay caadi u noqoto, dhinacyadu “waxay kobcin doonaan is -weydaarsiga dalxiiska, oo aad loo jecel yahay.”
Ruushka iyo San Marino waxay ka shaqeynayaan heshiis fiiso la'aan ah.
Heshiiska socdaalka fiisaha-la’aanta ah ee Ruushka iyo San Marino ayaa dhawaan la saxiixi doonaa.
Dalxiiska u dhexeeya San Marino iyo Ruushka waa mid caan ah, sida uu sheegay wasiir Lavrov.
Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta ku dhawaaqay kadib wada-hadal uu la yeeshay Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee San Marino, Luca Beccari oo booqanaya, in heshiis ku saabsan nidaamka socdaalka fiisaha-la’aanta ee labada dal uu ku dhow yahay inuu dhammaado oo si rasmi ah loo ansixin doono mustaqbalka dhow.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo xoghayaha arrimaha dibadda San Marino oo booqasho ku jooga Luca Beccari
“Waxaan leenahay heshiis mabda’ ahaan ah in la dardargeliyo shaqada heshiiska dowladaha ee safarada bilaa fiisaha ah ee muwaadiniinta labada dal. Heshiisku wuxuu diyaar u yahay ku dhowaad waxaanan u malaynayaa inaan dhowaan qabanqaabin doono saxiixiisa, ”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ruushka.
Sida laga soo xigtay Ruushka Wasiirka Arimaha Dibada Lavrov, Ruushku wuxuu rajaynayaa in sida ugu dhakhsaha badan xaaladda fayadhowrka iyo cudurrada faafa ay caadi u noqoto, dhinacyadu “waxay kobcin doonaan is -weydaarsiga dalxiiska, oo aad loo jecel yahay.”
San Marino waa microstate buuraley ah oo ku xeeran waqooyi-dhexe ee Talyaaniga. Ka mid ah jamhuuriyadihii ugu da'da weynaa adduunka, waxay haysaa inta badan dhismaheedii taariikhiga ahaa. Meelaha dhaadhaca ah ee Monte Titano waxay fadhisaa caasimadda, oo sidoo kale loo yaqaan San Marino, oo caan ku ah magaaladii hore ee darbi -jiifka ahayd iyo waddooyinka dhagaxa dhagaxa ah. Saddexda Taawar, oo ah qalcado u eg qalcado la dhisay qarnigii 11aad, waxay fadhiyaan dusha sare ee dariska Titano.
San Marino ma aha xubin ka tirsan Midowga Yurub ama Aagga Dhaqaalaha Yurub. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku haysaa xuduud furan Talyaaniga. Maadaama San Marino la heli karo oo keliya Italy galitaanku suurtogal ma aha iyada oo aan marka hore la gelin aagga Schengen sidaas darteedna xeerarka fiisaha Schengen ayaa quseeya xaqiiqda. Soo booqdayaasha ajnabiga ah ee jooga in ka badan 10 maalmood San Marino waa inay oggolaansho ka haystaan ​​dowladda.
San Marino waxay saxiixday heshiisyo fiiso la'aan ah oo madax-bannaan kuwaas oo qiimo astaan ​​u ah muwaadiniinta ajnabiga ah laakiin saamayn ku leh dadka haysta baasaboorka San Marino. San Marino waxay heshiisyo fiiso la’aan ah la saxiixatay Argentina, Austria, Bosnia iyo Herzegovina, Bulgaria, China, Finland, Hungary, Japan, Kenya, Latvia, Lithuania, Morocco, Portugal, Romania, Slovenia, iyo Boqortooyada Ingiriiska dadka haysta baasaboorka caadiga ah. .
Intaa waxaa dheer, heshiisyo ayaa sidoo kale lala saxiixday Azerbaijan, Gambia, Moldova, Eswatini, Tunisia, Turkey, iyo Uganda oo loogu talagalay dadka haysta baasaboorka diblomaasiga iyo adeegga.